Tan-tsoroko amin'ny fitsabona :: Mitohy ny tetikasa « Anjaratsara » ho an’ireo ankizy mifanintona • AoRaha
Tan-tsoroko amin’ny fitsabona Mitohy ny tetikasa « Anjaratsara » ho an’ireo ankizy mifanintona
Tokony ho vahaolana ho an’ireo ray aman-dreny, manoloana ny fanintona mihatra amin’ny zanany, ny fanatonana toeram-pitsaboana mba tsy hisian’ny takaitra goavana, toy ny fahasembanana samihafa mety hahazo ny ankizy. Izany indrindra no mahatonga ny tetikasa “HI Madagascar” handray anjara amin’ny ady amin’ny aretina “Mifanintona” amin’ny alalan’ny « Anjaratsara ».
Nahazo fanampiana fitaovam-pizahana antsoina hoe “Electro Encéphalogramme (EEG) » ny hopitaly CHU Boeny taorian’i Toamasina, izay hahafahana manatsara ny fitsirihana ny aretina mifanintona any amin’ny Faritra Analanjirofo sy Boeny hiasan’ny tetikasa.
Ankoatra ny fampitaovana dia mitohy hatrany ny fanofanana an’ireo mpanentana sy ireo mpitsabo mikatroka ao anatin’ny tetikasa. Eo hatrany koa ny fanolorana atrikasa eny antenantenany eny, ka nahafahana manamafy ny traikefa efa nananan’ireo ekipa rehetra. Hitombo hatrany, noho izany, ireo hahazo famatsiana fanafody sy fitsaboana maimaim-poana avy amin’ny ekipan’ny HI Madagascar.
Toetry ny andro